Broken Archives — Trip LEE - OFISIALY SITE
tapaka tapaka tapaka tapaka tapaka tapaka tapaka tapaka tapaka tapaka tapaka tapaka tapaka tapaka
Eritrereto The Bourne Identity. Io lehilahy io mifoha amin'ny sambo, ary tsy fantatro hoe iza izy. Izy nahita ny tsipiriany, ary mandeha ho any Soisa. Ary mahazo any amin'ny ady, ary mahatsapa izy ny fiofanana amin'ny ady. Moa ve tsy ho adala fa raha nahita ianao tsapaka nanana Ninja miafina fahaiza-manao? Fa ny sisa amin'ny horonantsary dia ny nisy nalehany mba hahitana hoe iza izy. Izy mahavita zavatra na dia tsy fantany momba ny. Fa raha tsy hahalala izany, dia tsy ho afaka ny hiaina toy ny…